Telegram dia havaozina amin'ny kinova 8.1 amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Izahay dia eo amin'ny fotoana lehibe ho an'ny Telegram satria ny mpampiasa dia mihamaro ny mpampiasa ary miampy tsikelikely ny fanampiana. Ny fampiharana izay manohy miady amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra lehibe hafa dia tsy mijanona amin'ny famoahana vaovao amin'ny endrika fanavaozana ary amin'ity tranga ity dia mahatratra ny kinova 8.1 ho an'ny Mac.
Izy io dia kinova miaraka amina endrika vaovao mahaliana maro ary ny sasany amin'izy ireo dia manolotra ny fahafaha-manao fampisehoana mivantana amin'ny fampiharana. Tsy isalasalana fa ny safidy azontsika ao amin'ny Telegram ho an'ny mpampiasa dia mihoatra lavitra ireo natolotry ny fampiharana fandefasan-kafatra mitovy amin'izany, saingy ilaina ny fampiasan'ireo mpampiasa azy ireo ary anaovany ny dingana farany. Tsy nitranga izany amin'izao fotoana izao ary ny fampiharana toa ny WhatsApp na ny Apple's Messages dia mitohy manjaka amin'ny fampiasana.
Ireto ny sasany amin'ireo fiasa vaovao nampiana tao amin'ny kinova Telegram 8.1 ho an'ny Mac. Na izany na tsy izany dia mitovy amin'ireo nampidirina tao amin'ny kinova farany an'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza ho an'ny fitaovana iOS sy iPadOS toa ny lohahevitra vaovao ho an'ny chat, fandraketana horonantsary mivantana na famakiana tapakila ankoatry ny zava-baovao hafa:
Lohahevitry ny chat
• Safidio ny iray amin'ireo lohahevitra 8 tsy misy toerana ao amin'ireo resakao manokana.
• Kitiho ny lohatenin'ny chat> Bebe (⋯)> "Manova loko" hisafidianana lohahevitra iray.
• Samy hahita lohahevitra mitovy amin'izany resadresaka izany amin'ny mpikirakira chat azy roa ireo.
• Ny lohahevitra miresaka rehetra dia misy dikanteny andro aman'alina, ary hanaraka ny toe-javatra maody maizinao.
Raketo an-tserasera mivantana na chat video
• Raketo ny horonan-tsary sy feo avy amin'ny fandefasana mivantana ny vondrona na fantsonao.
• Afaka manomboka manoratra avy amin'ny menio Settings (⋯) ny mpitantana.
• Safidio ny firaketana an-tsary ny sary na ny firosoana amin'ny fizahana.
• Ny firaketana vita dia alefa any amin'ireo hafatra voatahiry ao amin'ny mpandrindra ary azo zaraina mora foana.
• Ho hitanao fa misy rakipeo navoakan'ny teboka mena izay miseho eo akaikin'ny lohateny.
Fanamafisana ny famakiana vondrona kely
• Misafidiana iray amin'ireo hafatrao mivoaka amin'ny vondrona kely hahitanao hoe iza no nahita azy tato ho ato.
• Hiarovana ny tsiambaratelo, ny resak'ireo vakiteny dia tahirizina mandritra ny 7 andro aorian'ny nandefasana ny hafatra.
• Ny emoji animated sasany izao dia misy effets efijery feno rehefa voakitika, toy ny: afomanga: na: fo: mena.
• Raha misokatra ny chat ny sakaizanao dia ho hitan'izy ireo ny vokany rehefa tsindrio ilay emoji.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Telegram dia havaozina amin'ny kinova 8.1 amin'ny Mac
Safari 15 dia misy amin'ny macOS Big Sur sy macOS Catalina izao